Oganda: Nandrava ny tsenan’i Owino ny afo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2019 7:46 GMT
Mitatitra ny Daily Monitor any Oganda fa nanomboka tao amin'ny lavaka amin'ny rindrina iray manasaraka ny tsena amin'ny kianja ny afo, ary maro ireo niharam-boina miampanga ny orinasan'ny fitateram-bahoaka fa te-hanangana ny gara amin'ny afo. Miombon-kevitra ireo bilaogera sasany.
Phantom ao amin'ny Even Steven manoratra hoe:
Nirehitra ny tsena. Mijanona amin'ny afo aho satria ireo izay tokony hahalala, na dia nilaza izany aza tao anaty alahelo aza, dia mitazona ny heviny fa misy olona mandoro ny fiainan'izy ireo. Raha nihaino an'i PK Bbosa ny hariva rehefa nampivahiny mpivarotra sasany izy, dia hita fa ny minisitra Matiya Kasaija sy ny namany, minisi-panjakana misahana ny fisorohana ny loza voajanahary, Musa Echeru no niseho tamin'ny zavatra tokony ho heverina avy hatrany fa porofo lehibe: kavera (Ed.: harona plastika) sy tavoahangy kely izay mazava ho azy fa efa nahitana solika. Mampiahiahy fa tsy nojeren'ny polisy ireo entana ireo.
Geria ao amin'ny Ariaka manontany tena raha manana anjara toerana ny departemantan'ny afo:.
Nitsikera ireo mpanao politika Ogandey izay “manana fahasahiana hilaza fampanantenana poakaty no sady manaratsy ny governemanta” i Spartakuss Hoy izy nanoratra: